သူဖုန်းစားမလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » သူဖုန်းစားမလေး	28
Posted by ကျော်စွာခေါင် on May 14, 2015 in Poetry | 28 comments
ဒုက္ခတွေ တစ်ပွေ့ တစ်ပိုက်နဲ့ 
ခေါင်းငိုက်စိုက်မချတဲ့ မင်းကို တွေ့ တော့
မင်း အသက်မှ ရှင်သေးရဲ့ လား…
ငါတွေးပူရတယ်ကွဲ့ …။
ငါ့ကို လောက ဝတ်နဲ့ မင်းပြုံးပြသလို..
ငါလဲ မင်းကို ပြုံးပြတာ
ပန်းချီဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့သမ္မာကျမ်းစာအလိုပေါ့…။
အများကြီး မမျှော်လင့်နဲ့ …
မင်း နားလည်ထားဘို့ က
တနင်္ဂနွေ တနေ့ ဝက်လောက်သာ
အခါပေါင်းများစွာ ငါကျွှေးခဲ့တဲ့နေ့ လည်စာတွေမှာ..
တစ်မျှင်မှ မပါတာ မင်းသိပါတယ်..။
တို့ တွေ ခေါင်းငြိမ့် ခေါင်းခါ
လမ်းမ ပေါ်မှာ ငါ ……
ခဏခဏ ငတ်ခဲ့ဘူးတယ်..ကက်သရင်းရဲ့ ။ ။
လူကြီး လူကောင်းတွေ လှမ်းကြည့်လို့ 
ထားလိုက်စမ်းပါ ကက်သရင်းရဲ့ …..
ခရစ်တော် သောက်တာ မင်းသိမှာပေါ့…
အတူစားသောက်လို့ကမ္ဘာမပျက်လောက်ပါဘူး..
ငါရေးတဲ့ငါ့ကျမ်းစာမှာ…
ငါ..သမ္မာသမတ်ကျဘို့ ဘဲ လိုတယ်..
ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဘို့ ဘဲ လိုတယ်…
လမ်းအတူ လျှောက်ရအောင်……။ ။
kyaw swar kaung has written 79 post in this Website..
ပန်းချီကို လူမှန်းသိတတ်စကတည်းက အရိုက်နှက်ခံပြီး သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်.. 3D Animation အတွက် ပန်းပုရုပ်လေးတွေ ဖန်တီးပါတယ်..။
ကဗျာရေးတယ်..စာရေးပါတယ်..။ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့ စာကို အသည်းအသန်ဖတ်ပါတယ်..။
View all posts by ကျော်စွာခေါင် →	Blog
ခင်ဇော် says: ခေါင်ပြန်လာတယ်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 754
ကျော်စွာခေါင် says: ပြန်လာပါပြီ…. မျက်လုံးလဲ သက်သာပြီ ဆိုတော့လေ…
အားလုံးကို လွမ်းနေရတာ ကြာပေါ့…။
kai says: ကဲ…လာ..
ဒီနေ့ပဲ.. စစ်ဒဇင်ဒီပလိုမေစီ.. ပညာခန်းပွဲလေးသွားတက်တယ်..။
အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်တဲ့.. ရုရှားမတယောက်နဲ့… ရုရှားလိုမသိတဲ့.. အမေရိကန်တယောက်.. ဂိုဂယ်ကျေးဇူးနဲ့.. စကားဖေါင်ဖွဲ့လိုက်ကြတာ… ၄နာရီကြာတဲ့အကြောင်း.. စပီကာတယောက်ပြောပြခဲ့..။
ကျော်စွာခေါင် says: သူကြီးရေ..
ရွာပြန်လာ လာခြင်းကို နွေးထွေးစွာ ကြိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ…
သူက ရိုမေးနီးယန်းလေးဗျ…။ google translate အားကိုးပြီး စကားသင်ရဦးမှာပေါ့…။
kai says: ရိုမေးနီးယားဆို.. သွေးစုတ်တတ်တဲ့.. သူတွေနေတယ်ဆိုတဲ့.. သမိုင်းချည်းပြေးမြင်..။
ယားကနေ.. ယန်းတော့.. ချောသလား…ဟင်…
…. လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinsett @ Maung Thura says: .ဟေးးးးးးးး ချစ်သော ဦးခေါင်ရည်… ပြန်လာတယ်…
ဦးခေါင်ကို မြင်တော့မှ… ဦးခေါင်ရဲ့ စာပေအနုပညာကို ဖတ်လိုက်ရမှ…
ဦးခေါင်ရည်ကို ဘယ်လောက် လွမ်းနေကြောင်း…ပိုသိလိုက်ရတယ် ဒီကဗျာလေးကိုလည်း တအားကြိုက်မိတယ်…
ကိုယ်ချင်းစာတရား ဘယ်လောက်အရေးကြီးလိုက်သလဲ….လို့… ကဗျာလေးက ပြောနေတယ်…
ကျော်စွာခေါင် says: အလင်းဆက်ရေ..
အလင်းဆက်..ဦးခေါင်ကို သံယောဇဉ်ရှိတာ သိပါတယ်ဗျာ..
ခဏလေး အချိန်ပေးခဲ့ရတာ အားနာမဆုံးပါဘူး…ဟို..ဟို စိမ်းလဲ့ကန်သာလား ဘာလား…
ဦးမိုက် ခေါင်းဆောင် လုပ်တုန်းကလေ…။ ခုထိ မပေါ်သေးဘူး..အဲ ပြန်မဆုံသေးဘူးလို့ …။
အားနာမှုတွေကို စာပေနဲ့အကြွေးပြန်ဆပ်ပါ့မယ်..။
padonmar says: ကက်သရင်းလေးမှာ မိတ်ဆွေကောင်းရလိုက်တာတွက်ရော
ကျော်စွာခေါင် says: ကျေးဇူးပါ မမမာ…
ကျနော့်အတွက်လဲ ဂဇက်ရွာက မမာတို့ က မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါဗျာ..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 803
ကြွေလွင့် ပန်း says: ဆင့်ပွားတွေးခေါ် ကဗျာလေးပါ။
ခုတော့ မင်းမကြားနိုင်အောင်ပဲ။ ။
ကျော်စွာခေါင် says: ဆင့်ပွား ကဗျာလေးကလဲ သီးခြား ကောင်းနေတာပါဘဲ ကိုစိုင်းရေ..။
Ma Ma says: ဆြာခေါင် ပြန်လာလို့ ၀မ်းသာပါတယ်။
ကရုဏာစကားတွေ ရွတ်ဆိုတတ်တာ…… လို့ ဆိုသလို မလိုက်နာနိုင်သေးဘူး။
ဆန့်ကျင်ဘက်တွေးမိတာက ဒီမှာဖရဲသီးစိတ်ဗန်း မှောက်ကျဟန်ဆောင်ပြီး သနားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုပ်စားနေကြတာတွေကို တွေ့ရမြင်ရတော့လည်း………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 754
ကျော်စွာခေါင် says: မမရေ..
သူ့ နေရာနဲ့ သူပါဘဲ…ရည်ညွှန်းလိုက်တာလေးကို ပြောတာပါ..။
ကျနော် ပြန်လာမှ မမ ကားမှာ AIRBRUSH နဲ့ရှယ်ဆွဲပေးမယ်..။
မမ…ကားနှင့် ကိုက် ၅၀ ပါတ်လည် ဖရဲသီးလုံးဝ မရောင်းရ…။ ဆိုပြီး မမပုံတူနဲ့ဒီဇိုင်းဆွဲပေးမယ်..။
ဒီဇိုင်းခ အနေနဲ့မုန့် ကျွှေးပါ..။
အောင် မိုးသူ says: မင်း နားလည်ထားဘို့ က
ကျော်စွာခေါင် says: ကျေးဇူးပါ ကိုအောင်မိုးသူ..။
Mike says: ငါရေးတဲ့ငါ့ကျမ်းစာမှာ…
ကျော်စွာခေါင် says: ကိုမိုက်..
သတိယနေတယ်ဗျာ…တစ်ကယ်ပါ…။ စကားတောင် ဝ အောင်မပြောခဲ့ရဘူးလေ
Ma Ei says: ပန်းချီဆရာတစ်ယောက်နဲ့ 
အတူစားသောက်လို့ကမ္ဘာမပျက်လောက်ပါဘူး….
မေတ္တာတရားတွေကြောင့် လှပတဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ…
ကျော်စွာခေါင် says: မအိ..ရေ
မေတ္တာတရားနဲ့ကမ္ဘာကြီး လှပစေဘို့ က ……တော်တော်ခက်တာ..။ အခုအခြေအနေတွေက
အကောင်းဆုံးနည်းပညာတွေ အလှဆုံး အဆင်တန်ဆာတွေ ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ ယဉ်ကျေးယုတ်မာသော ကျောက်ခေတ်ပေါ့ မအိရေ။
မြစပဲရိုး says: ဟေး ……
တို့ ပန်းချီဆရာ ကဗျာရွတ်ပြီး ရွာ ပြန်လာပြီ။ :-)))
အဲဒီ မိန်းကလေး ကို သူ့ ပုံတူလေး ချယ်ပေးလိုက်ရင် အစား ကောင်း စားရတာထက် ပိုပြီး ဝမ်းသာ သွားမယ်ထင်လား။
ဒါမှမဟုတ် ကြက်ကြော်ကိုဘဲ ပို ကြိုက်မလား။
. တွေးလိုက်မိတာ။ :-)))
ကျော်စွာခေါင် says: အရီးခင်…
ပုံတူဆွဲပေးရင် သူပျော်မှာ မဟုတ်ဘူး အရီးခင်..။
ညနေ ၂ နာရီ ကျော်နေပြီ ..ဘာမှ မစားရလို့ပန်းသီးလေးကိုက်စားနေတာ…။
ဆာလောင်ငတ်မွတ်နေသူအတွက်တော့ ပုံတူပန်းချီက အထောက်အကူ မပြုဘူးလေ..။
ကိုက်စားလို့ မှ မရတာ..။ ခုချိန်မှာ ကြက်ကြော်နဲ့ ပေါင်မုန့် က အကောင်းဆုံးပေါ့…။
အိမ်မှာ ပက်လက်ကုလားထိုင်အခင်းမရှိလို့ ….ပန်းချီကျော် မိုဒီလယာနီ ရဲ့ မူရင်းဆီဆေး ပန်းချီကားကို
ပက်လက်ကုလားထိုင်အခင်း လုပ်ပြီး ထိုင်တဲ့ အဘိုးကြီးအကြောင်း စာအုပ်ဖတ်ဘူးတင် အရီးခင်..။
​ဒေါ် လေး says: ကဗျာ​လေးက ​ကောင်းလိုက်​တာ
ကျော်စွာခေါင် says: ဒေါ်လေး…
ကဗျာလေးကို ခံစားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
Alincho says: ကိုယ်ချင်းစာတရား ကမ္ဘာ့အလိုအပ်ဆုံးတရား။
ကျော်စွာခေါင် says: မှန်တာပေါ့…အလင်းချို…။
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: သာဓုပါတော်…
ကျော်စွာခေါင် says: အမျှပါဗျာ………….
ဦးကြောင်ကြီး says: .. နန္ဒာခေါင်ကို ခြစ်သယ်ဗျာ… အနော့်ဂိုသဏှားပါ ပါပါခေါင်။